I-Blue Ridge Mountaintop Getaway Eseceleni - I-Airbnb
I-Blue Ridge Mountaintop Getaway Eseceleni
Fries, Virginia, i-United States
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Loren
U-Loren Ungumbungazi ovelele
Jabulela iholidi eliphumulele endaweni yethu yokubalekela ekhabetheni elisesiqongweni sezintaba. Ithutheleke e-Blue Ridge Mountains engasemngceleni we-Jefferson National Forest, le khabhini iyindawo ethokomele enokubukwa kwe-panoramic ye-dynamite. Chitha isikhathi sakho uhlezi kuvulandi ojikajikayo obheke emaphandleni eNtaba i-Appalachian. Ake ubuke iziqongo ezine eziphakeme kakhulu e-Virginia, buka oklebe nezinkozi zindiza zisezingeni lamehlo, futhi ujabulele imvelo ngokungcono kakhulu.
Ngaphakathi kwe-cabin, uzothola:
-Ikhishi elincane kodwa eligqoke ngokugcwele elinesiqandisi, isitofu, ihhavini, i-microwave, i-toaster, i-coffeemaker, izitsha, izitsha, amabhodwe namapani.
-Igumbi lokuhlala eline-TV yesikrini esiyisicaba esixhunywe kwisathelayithi ye-Dish Network enazo zonke iziteshi zenethiwekhi kanye ne-Showtime, i-Cinemax, i-Starz, nezinye eziningi.
-Ngeshwa, ASINIKEZI i-inthanethi ngalesi sikhathi. Nokho ukwamukela umakhalekhukhwini kanye nokusetshenziswa kwedatha kuqinisekisiwe ukuthi kusebenza kahle ezinhlelweni ze-U.S. Cellular kanye ne-Verizon. (Asinalo ulwazi lokuthi ezinye izinkampani zenethiwekhi zizosebenza kahle kanjani ngalesi sikhathi.)
-Igumbi lokugezela elilodwa eligcwele elineshawa kanye newasha / isomisi elitholakala phansi phansi eduze kwekhishi.
-Ukushisa ngokushisa kwe-baseboard.
-Phezulu kukhona izindawo zokulala ezimbili ezincane; igumbi elilodwa lokulala elinombhede wendlovukazi kanti elinye linemibhede emibili engamawele. AYIKHO IMINYANGO ehlukanisa amagumbi okulala kwelinye noma izitebhisi.
-Sizohlinzeka ngenani lokuqala lephepha lasendlini yangasese, amathawula wephepha, izikhwama zikadoti, insipho yezitsha, insipho yezandla, neshampoo, kodwa ukuhlala isikhathi eside kungase kudingeke uthenge ezinye izinto.
Ngaphandle kwekhabhinethi, uzothola:
-Kuvulandi ongaphambili onojingi kanye nezihlalo ezimbili ezinyakazayo.
-Indawo yokukhosela yepikiniki enetafula lepikiniki kanye ne-gas barbecue grill.
-Indlela yokuhamba yasehlathini egudla umgwaqo ongemuva kwekhabhini.
-Imibono yezindawo zasemaphandleni. Ungabona ezinye zezilwane zasendle zendawo ezihlanganisa inyamazane emhlophe, i-turkey yasendle, ama-raccoon, ama-possums, oklebe nama-eagles. Nakuba kungabonakali ngendlela evamile, amabhere amnyama, ama-coyote, izimpungushe nezinyoka nazo zihlala kule ndawo.
-Ukuya endaweni kuyingxenye yokuzijabulisa ngokwakho. Uzobe ushayela emigwaqweni emincane yasemakhaya nemfuyo ehlanganisa izinkomo, izimvu, amahhashi, izimbuzi nezinkukhu emikhakheni ehlukahlukene. Sicela uqaphe ngenkathi ushayela; kujwayeleke kakhulu ukuthi imfuyo kanye/noma izilwane zasendle zibe semgwaqeni! Uzoba semgwaqweni oyitiyela isikhathi esiningi sohambo, kodwa ngasekupheleni, lokhu kushintsha kube umgwaqo owubhuqu womzila owodwa njengoba ukhuphuka intaba. Indlela eya ekhabetheni ingumqansa, ngakho-ke sincoma izimoto ezinamasondo angaphambili noma amasondo angu-4.
-Phakathi nezinyanga zasebusika, ukubhuka kungase kukhanselwe ngenxa yokukhathazeka ngokuphepha uma kuneqhwa noma iqhwa emgwaqeni.
-Kunezitebhisi ezi-4 ezikhuphukela kuvulandi ongaphambili, futhi kukhona izitebhisi eziyi-13 eziwumngcingo ngaphakathi ukuya emakamelweni okulala esitezi sesibili.
-Kukhona isango lekhebula (empeleni ikhebula elinqamula umgwaqo) elinengidi ehlanganisiwe ekungeneni kwe-driveway kanye nekhiphedi yokuzihlola emnyango ongaphambili. (Sizohlinzeka ngamakhodi kanye nezikhombisi-ndlela zokushayela ezinemininingwane ngaphambi kokuhlala kwakho. Sincoma ngokuqinile ukuthi uphrinte lolu lwazi ngaphambi kokushayela njengoba kungase kube nezindawo zesevisi yeselula yamabala.)
4.97 · 181 okushiwo abanye
Idolobhana laseFries (elibizwa ngokuthi "iqhwa") liqhele ngemizuzu eyi-15-20 ukusuka ekhabetheni, kanye nezindawo ezimbili eziseduze zokufinyelela zeNew River Trail. I-New River Trail State Park iyipaki ewumugqa egijima amakhilomitha angu-57 kuhlanganisa namamayela angu-39 ahambisana nomfula omangalisayo nomlando oseduze nomzila wesitimela phambilini. Umzila uyisicaba futhi uhlanganisa amabhuloho e-trestle, imigudu, izimpophoma ezincane, nezinye izindawo ezinhle zasehlathini ezithokozelwa abaqwali, abagibele amabhayisikili, nabagibeli bamahhashi babo bonke ubudala.
Izitolo eziseduze zegrosa nempahla kuzoba i-Star Market (~imizuzu engu-15) kanye ne-Dollar General Store (~imizuzu engu-20) e-Fries, VA. Kunezitolo ezinkulu zegrosa kanye neSuper Wal-Mart etholakala e-Galax, VA (~ imizuzu engu-35). Singancoma ukuthi ucoshe izinsiza osendleleni eya endlini ukuze wonge isikhathi.
Cishe imizuzu engu-20, unqamula kwenye yezindawo zokufinyelela ezinhle kakhulu ze-New River Trail, uzothola "i-New River Outdoor Adventures." Lena inkampani yasendaweni ehlinzeka ngamasevisi e-shuttle kanye nokuqashiswa kwezikebhe, ama-kayak, amashubhu, ukuhamba ngebhayisikili, ukudoba, njll. Iphinde ithengise isiyengo esibukhoma kanye nokubhekana nazo zonke izidingo zakho zokudoba, kanye namalayisensi okudoba nokuzingela (okungaba isikhathi esifushane noma eside. ). Uma ushayela (276)237-TUBE(8823) bazokwenza ngendlela oyifisayo noma yikuphi ukuzijabulisa ongase ukufunele iqembu lakho.
Idolobha laseGalax lihamba cishe imizuzu engama-30 ngemoto. Ngaphakathi kwe-Galax, uzothola izindawo zokudlela eziningi, izinketho zokudla okusheshayo, izitolo zakudala, indawo yedolobha enokuhamba kancane, ithiyetha yamamuvi amancane, i-bowling alley, kanye ne-Super Wal-Mart, phakathi kwezinye izinsiza.
I-Galax iphinde ibe yikhaya leNgqungquthela ye-Old Time Bluegrass Fiddler's Convention, eyenzeka minyaka yonke ngo-August kusukela ngo-1935. Kodwa ungakhathazeki, sonke isifunda sase-Appalachian saziwa nge-Bluegrass kanye nomculo wendabuko "wakudala". ingajatshulelwa unyaka wonke. I-Rex Theatre e-Galax, VA isingatha umculo obukhoma wamasonto onke neminye imicimbi ekhethekile. Ithiyetha yomlando wakwaFries eFries, VA futhi isingatha masonto onke ngoLwesine ebusuku Bluegrass "jam sessions" neminye imicimbi ekhethekile. I-Blue Ridge Music Centre emangalisayo ingatholakala ku-Blue Ridge Parkway e-Milepost 213. Lesi sikhungo sihlanganisa i-amphitheatre enkulu yangaphandle enochungechunge lwekhonsathi yasehlobo, imnyuziyamu yomculo ozuze umklomelo womculo wakudala, nokukhonjiswa kwansuku zonke komculo wamahhala ovela kubaculi bendawo. .
Ukufinyelela eBlue Ridge Parkway kuqhele ngamamayela angama-22 kuphela, noma cishe imizuzu engama-35 ukushayela. I-Blue Ridge Parkway ihamba amakhilomitha angu-469 inqamula eVirginia naseNyakatho Carolina futhi ingenye yezindawo ezivakashelwa kakhulu zeNational Park System. I-Parkway ihlinzeka ngokuthile kwawo wonke umuntu okuhlanganisa nezindawo zokushayela ezinhle, ukubukwa kwezintaba, ukuhamba ngebhayisikili/ukugibela izintaba/imizila yamahhashi, izimpophoma nemigodi yokubhukuda, izindawo zomlando zamapulazi neminyuziyamu, imibukiso yamasiko, nokunye okuningi.
I-Grayson Highlands State Park iwuhambo olude, cishe amakhilomitha angu-45 (noma ~ amaminithi angu-70) ukushayela kude nekhabethe. Leli paki lisebenza njengesango eliya esiqongweni esiphakeme kunazo zonke esifundazweni, iMount Rogers, kanye ne-Appalachian Trail kanye ne-Grayson Highlands. Leli paki linikeza izindlela zokuhamba izintaba, imizila yebhayisikili, imizila yokugibela amahhashi, amatshe amatshe, ukudoba, ukugibela izikebhe, kanye nethuba lokuhlangana namaponi asendle.
Nginikeza izivakashi zami indawo yazo nobumfihlo, kodwa ngitholakala kalula ngomakhalekhukhwini ukuze ngithumelelane imiyalezo noma ngezingcingo.
ULoren Ungumbungazi ovelele